ရေကျောက်၏လက္ခဏာများကို စီမံနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ကလေးကျန်းမာရေး » ရေကျောက်၏လက္ခဏာများကို စီမံနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ
ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ရေကျောက်သည် ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဗဲရီဇဲလားဇိုစတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးအများစုတွင် ရေကျောက်ပေါက်နိုင်ပြီး များသောအားဖြင့် အသက် ၁၀ နှစ်မတိုင်မီတွင် အဖြစ်များ၏။
ကူးစက်ခံရစဉ်တွင် ခုခံအားစနစ်မှာ ပဋိပစ္စည်းများဟုခေါ်သော ပရိုတင်းများကိုထုတ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာသောကလေးအများစုနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ရေကျောက်ပျောက်ခြင်းကို အိမ်မှာကုရုံနှင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
ရေကျောက်ဖုများက ယားပါသည်။ သို့သော် မကုတ်ရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရေပြားပိုးဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရည်ကြည်ဖုများပျောက်ပြီးနောက် အမာရွတ်ကျန်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယားယံခြင်းကို လျော့ချနိုင်မည့်နည်းများရှိပါသည်။
အုတ်ဂျုံနှင့်ရေချိုးခြင်း၊ အအေးဝတ်အုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် antihistamine များသောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကလေးအတွက် ဆေးမသုံးခင် ကလေးအထူးကုနှင့် အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
ဖျားခြင်းသည် ပိုးကူးခြင်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖျားနာမှုကိုဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်အပူချိန်တက်လျှင် မအီမသာ ခံစားရသောကြောင့် မိဘများက အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများကို ညွှန်ကြားချက်များသေချာဖတ်ပြီးမှ တိုက်ပါ။
ကလေးကို ဘယ်ဆေးမဆို မပေးခင် ဆရာဝန်နှင့်အရင်ဆွေးနွေးရပါမည်။ ကလေးများကို အက်စ်ပရင်မတိုက်ရပါ။ Reye’s Syndrome ဖြစ်တတ်ပြီး ၎င်းသည် ကလေးများကို အက်စ်ပရင်ပေးမိပါက ဖြစ်တတ်သော ပြင်းထန်သည့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ရေကျောက်သည် ကူးစက်လွယ်သောရောဂါဖြစ်၏။ အများစုတွင် ကူးစက်ခံရသူနှင့် ထိတွေ့ပြီးနောက် ကူးစက်ခံရပါသည်။ ကလေးတွင် ရေကျောက်ပေါက်နေပါက ရေကြည်ဖုများကွဲပြီး မပျောက်မချင်း၊ ပထမလက္ခဏာစပေါ်ပြီး ၁၀ ရက်နောက်တွင်မှ ကျောင်းကိုလွှတ်ပါ။
ရေကျောက်ကိုကာကွယ်ရန် လူအများသည် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး ကလေးကိုထိုးပေးတတ်ကြပါသည်။
ရေကျောက်ကြောင့်ဖြစ်သော မအီမသာခံစားချက်ကို လျော့ချပါ။
တစ်ချို့သောဆေးများသည် ရေကျောက်ရောဂါ အခြေအနေမဆိုးစေရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
ရေကျောက်ရောဂါပိုးနှင့် ထိတွေ့မိပြီးနောက် ၃ ရက်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပါက ဖျားနာမည်မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်လျှင်လည်း အပျော့စားလောက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
၎င်းထိုးဆေးများသည် ပြင်းထန်သော ရေကျောက်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ ခုခံအားနည်းသူများ ရေကျောက်ပိုးနှင့်ထိတွေ့ထားပြီး အရင်ကမပေါက်ဖူးလျှင် ပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်၌ ရေကျောက်ပေါက်သည့်လက္ခဏာများ ရှိလာပြီးနောက် ပါရာစီတမော့၊ antihistamine (ဘာမီတွန်) သို့မဟုတ် ပဋိဇီဝဆေးများကို ၀ယ်သုံးနိုင်ပါသည်။ ကလေးကို ဆေးမတိုက်ခင် တိကျသည့်ပမာဏကို သိရှိနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
သို့သော် တိကျမှန်ကန်ကုသကို အိမ်တွင်ကောင်းကောင်းကုသနိုင်ရန် ပြင်းထန်သည့် နောက်ဆက်တွဲများကိုကာကွယ်နိုင်ရန် ရေကျောက်ပေါက်သူတိုင်း ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါသည်။
ကလေးငယ်ကိုရေချိုးပေးတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆပ်ပြာမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ဖို့လိုတာလဲ
ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့အရပ်မှာ ကလေးကို သေးခံမလောင်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ခု
တုံ့ပြန်လွယ်အသားအရေရှိတဲ့ကလေးအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
ကလေးအရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဒီဇငျဘာ 23, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇငျဘာ 23, 2017
Chickenpox (Varicella) – Home treatment. http://www.webmd.com/vaccines/tc/chickenpox-varicella-home-treatment. Accessed January 18, 2017
Treatment for chickenpox. http://www.nhs.uk/Conditions/Chickenpox/Pages/Treatment.aspx. Accessed January 18, 2017
Chickenpox (Varicella) – Prevention and Treatment. https://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html. Accessed January 18, 2017
သင့်ကလေးတွင်ဖြစ်တတ်သည့် အဖြစ်များသော ရောဂါများ
fifth disease ဆိုတာဘာလဲ
မျှတသော စားသောက်မှုပုံစံဆိုတာ ဘာလဲ
ကလေးကို ကျောင်းမှာ ဘေးကင်းစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ